काठमाडौँ । केहि दिनदेखि अस्वाभाविक रुपमा बढिरहेको सुनको मूल्यमा आज केहि गिरावट आएको छ । मंगलबार प्रतितोला ८२ हजार ७ सय रुपैंयामा कारोबार भएको सुन आज ४ सय रुपैंयाले घटेर प्रतितोला ८२ हजार ३ सय पुगेको ने...
काठमाडौँ । आज (बुधबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव विदेशी मुद्रामा पनि परेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११८ र...
सानोमा इच्छा डाक्टर बन्ने थियो । प्रवेशिका परीक्षा उत्र्तीण गरे पनि बाल वयको सपना पूरा गर्न पाटन संयुक्त क्याम्पसमा विज्ञान विषयमा भर्नाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए । तर जसलाई क्याम्पस भर्ना गरिदिन भनेका थिए, उनले गर...
सुनको मूल्यमा आजपनि नयाँ रेकर्ड, हेर्नुहोस् कति पुग्याे ?
काठमाडौं । आज सुनको भाउले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । सुन प्रति तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर ८२ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ । जुन हालसम्मकै उच्च भाउ हो ...
अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ अहिलेसम्मकै महंगो, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव विदेशी मुद्रामा पनि परेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११८ र...
आज पाउण्डको मूल्य बढ्यो डलरको घट्यो, कुन देशको कति ?
फागुन २६, २०७६, सोमबार
काठमाडौँ । आज (सोमबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ भने केहीको बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ २८ पैसा त...
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
फागुन २५, २०७६, आइतबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ८२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। ...
शनिबार बढेको अमेरिकी डलरको भाउ आज स्थिर, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (आइतबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ। &nb...
धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो। अघिल्लो साता निकै उच्च बिन्दुले बढेको बजार यस साता तुलनात्मकरुपमा ओरालो लाग्यो । पाँच कारोवार दिनमा एकाध दिनमात्रै बजारले...
काठमाडौँ । आज (शनिबार) पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ।...